Qoraa Live, oo loogu talagalay bloggers oo kala - Geofumadas
Qoraa Live for bloggers la kala diray
Febraayo, 2008 Internet iyo Blogs
Waxyaabaha yar yar ee Micrososft ayaa sameeyey taas oo loogu yeeri karo cajiib ah tanna waa mid ka mid ah. Waxay ku saabsan tahay Qoraa Live, codsi gaar ah oo loogu talagalay mulkiilayaasha blogga oo xalinaya dhibaatooyin badan oo qoraal ah si toos ah gudiga adeeg bixiyaha.
Waxa aan ugu jeclahay:
1 Waxay ku habboon tahay mawduucyo badan oo blogging ah.
Adigoo si fudud u dooranaya ikhtiyaarka "ku dar adeegga blog-ka cusub", nidaamku wuxuu leeyahay saaxir u saamaxaya ra'yi si uu u kala xusho adeegga barta internetka ee la wadaago ama meelaha bannaan (sida Microsoft had iyo jeer u soo jeedinayso jirdilkeeda) laakiin markaa marka aad dooranayso mid kale, kaliya marka lagu daro Blog url, magaca adeegsadaha iyo erayga sirta ah ee nidaamku wuxuu gartaa meeshuu ku fadhiyo ee u dhexeeya dhexdooda wuxuu la jaan qaadayaa:
Nooca la kicin karo
2 Waxaa loo qori karaa xayeysiis
Tani waa tan ugu fiican, sababtoo ah waxaad ku qori kartaa boostada, oo u kaydso sida qorshe degaaneed oo aad dooratid wakhti aad ku dhajin kartid. Nidaamku wuxuu aqoonsan yahay hababka caadiga ah ee calaamadaha iyo qaybaha, oo ay ku jiraan taariikhda iyo waqtiga daabacaadda. Waxaan u isticmaalaa marka aan meelo halkaas oo ay jiraan xiriir lahayn, qor oo sidaas daraaddeed muuqan mar dhowr maalmood boostada ama u qor badan isla maalintaas iyo saaray maalmo kala duwan ee daabacaadda safri ... sidaas darteed ha illaawin ????
Inkastoo aad shaqeyneyso goobo, waxaad dib u eegi kartaa boostada.
3 Tifaftiraha Wysiwyg aad u xoogan.
Tifaftirahaagu waa, sida dad badan oo kale, inkasta oo aan helayo fududaynta maareynta miisaska iyo sawirrada wax ku ool ah, taas oo la socota guddiga WordPress qiimo badan. Iyada oo muuqaalka sawirada lagu daro waxaad ku dari kartaa watermarkada, hooska ama xuduudaha caadada ah iyo isku xirnaantu waa wax fiican.
Isla la mid ah sawirada, waa wax fiican in ay taageerto nuqul / dhejin laga soo bilaabo codsiyada kale, halka WordPress waa in aad soo dejiso sawirada marka hore ka dibna meel u dhigo ... aynu ku dhahno Blogger.
4 Is-dhexgalka waxa aad hayso
Tani waa mid aad u wanaagsan, waxaad furi kartaa boostada horay loo daabacay oo ay u sameysey degaanka, inkasta oo aad u baahan tahay mashiinka raadinta adigoo isticmaalaya taariikhda ama taariikhda. Waxaad sidoo kale dooran kartaa FTP, sidaa darteed waxa aad boostada ku keydsanayso blogka laakiin sawiradaada waxaa lagu martiqaaday meel kale ... wixii aad martigeliso waxay leedahay xadka ama in bixiyahaagu uusan damaanad qaadi karin.
5 Furan horumar
Waqtiga gaaban ayaa dad badani horey u soo dejiyeen waxoogaa waxtar ah, sida adoo ku daraya xayeysiisyada AdSense, galiso fiidiyowyo, qolal muuqaal ah iyo sida aad u akhrido hubi qof inuu qabanayo wax aad qabaneyso ...
Waa hagaag, marka hore, oo leh khariidado khariidad ah, waxaad kaliya ku dari kartaa khariidadaha loo yaqaan "Virtual Earth maps", inkastoo furitaanka horumar laga gaarayo, ma qaadanayo waqti dheer in qof uu sameeyo wax adeegyo kale ah ... waxaana rajeynayaa in Microsoft ay aqbali doonto. Laakiin waad ogolaatay in aad nuqul ka sameysatid khariidooyinka google oo ay soo bandhigaan caadi ahaan.
Waqti waliba wuu laalaadaa, in kasta oo ayan u burburin sidii "ka fikirida geeridaada", laakiin ka dib ay nolosha ku soo noqoto.
Intaas waxaa dheer, kharashka bilawga ah si loo dhiso xarfaha UTF.
Haddii aad leedahay blog, waa u qalantaa cadee.
Post Previous«Previous Iibsiga 3D Dhulka Google Earth ilaa AutoCAD
Post Next Mabaadii'da 7 ee qaabka loo yaqaan 'multilayer model'Next »
2 Jawaab ayaa ku socota "Live Writer, ee loogu talagalay bloggers-ka"
???? taasi waa inay ahaato mid wanaagsan
Cesar Tapuy isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan nahay shabakad ah bulshooyinka asaliga ah ee dhaqanka Kichwa, oo ku yaala daqiiqado 30
baska laga soo galo magaalada Tena. Waxay leedahay qiyaastii 1000 hektar oo lagu kordhinayo beerashada
ee waxsoosaarka beeraha ee isticmaalka maxaliga ah, iyo haddii ay jiraan siyaado dheeraad ah oo ay u baxaan si ay u iibiyaan
Suuqa suuqa Tena oo ku yaala 20 illaa xad.